Alahady 31/01/2016 : Tenin’Andriamanitra – Ecar Sainte Anne Anjomakely
Vakiteny voalohany: Bokin’i Jeremia Mpaminany (Jer. 1, 4-6. 17-19)
Taratasy voalohan’i Md. Paoly Apôstôly ho an’ny kristianina tany Kôrinty (1 Kôr. 12, 31—13, 13)
Ry kristianina havana, ny fanomezana ambony indrindra no irio mafy, dia izao lalana tsara indrindra atoroko anareo izao. Na dia miteny amin’ny fitenin’ny olona sy ny Anjely aza aho, nefa tsy manana ny fitiavana, dia tonga varahina maneno sy kipantsona mikarantsana fotsiny aho. Na dia nahazo fanomezana haminany aza aho, ka mahalala ny zava-miafina rehetra, sy manana ny fahalalana rehetra, ary manana ny finoana rehetra, hatramin’ny mahafindra tendrombohitra aza, raha tsy manana ny fitiavana, dia tsinontsinona aho. Na dia zaraiko ho an’ny mahantra aza ny fananako rehetra, ka atolotro hodorana mbamin’ny tenako, raha tsy manana ny fitiavana aho, dia tsy mahasoa ahy akory izany rehetra izany.
Evanjelin’i Jesoa Kristy nosoratan’i Md Lioka (Lk 4, 21-30)